သင့်ပစ္စည်းတွေပိုရောင်းရဖို့ ဆိုင်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲ ? – Global POS & GOLD
သင့်ပစ္စည်းတွေပိုရောင်းရဖို့ ဆိုင်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲ ?
Retail လုပ်ငန်းတွေ အင်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ သင့်ဆိုင်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်ဒီဇိုင်း ကွဲပြားခြားနားမှု ကလည်း ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကို သိလာ ရတော့မှာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်ပြီး ပစ္စည်းတွေ ပိုမိုရောင်းရဖို့အတွက် လက်လီရောင်းချသူတွေလုပ်လေ့လုပ်ထ ရှိတဲ့ အခြေခံဒီဇိုင်းနည်းလေးတွေကိုတော့သိထားသင့်ပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ကတော့ ဈေးဝယ်သူတွေ မိမိဆိုင်ကိုလာဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ရမယ် လာခဲ့ရင်လဲ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ရှာဖွေ နေရမယ် ပြီးရင်တော့ ခြေလှမ်းတွေကငွေရှင်းတဲ့ကောင်တာဆီကိုဦးတည်နေရမယ်။သင့်စိတ်ထဲမှာသိထားရမှာကလူတစ်ယောက်ဟာသင့်ဆိုင်ထဲ ဝင်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ဝယ်မယ်မဝယ်ဘူး ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် သင့်ဆိုင်ရဲ့ စမတ်ကျတဲ့အပြင်အဆင်က အရင်ဆုံးကူညီပေးနေတယ်ဆိုတာကတော့ လုံးဝသေချာပါတယ်။
ဝင်ဝင်ခြင်းနေရာ တနည်းအားဖြင့် “decompression zone” လို့ ခေါ်ကြတယ်။အဲ့နေရာလေးကဈေးဝယ်သူတွေသင့်ဆိုင်ထဲဝင်ဝင်ချင်း ပထမဆုံးထိတွေ့ရမယ့် နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ၅ ပေကနေ ၁၅ ပေလောက်ထိနေရာယူပြသထားလို့ရပေမယ့် သင့်ဆိုင်ရဲ့အကြီးအသေးပေါ်လဲ မူတည်ပါသေးတယ်။ အဲ့နေရာလေးဟာဈေးဝယ်သူတွေ ဆိုင်အပြင်ဘက်ကနေ သင့်ဆိုင်အတွင်းထဲကို ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ့် ပေါင်းကူးတံတားလေးတစ်ခု လဲဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဝယ်သူတွေဟာ သင့်ဆိုင်ရဲ့ မီးအလင်းအရောင် ၊ ပြင်ဆင်မှုတွေ ၊ ပြသထားမှုတွေနဲ့ ကာလာတွေရဲ့ လိုက်ဖက်မှုတွေကို ကြည့်ပြီး သင့်ဆိုင်ရဲ့ တန်ဖိုးကို အကဲဖြတ်ပေးမယ့်နေရာလေးတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဆို ဝင်ဝင်လာချင်းနေရာမှာပဲ ပစ္စည်းတွေကိုပြသထားတော့ ဈေးဝယ်သူတော်တော် များများဟာ အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျော်ပြီးဆိုင်အတွင်းကိုပဲ ဝင်သွားကြတဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ညာဘက်ကိုသွား . . .
North America မှာရှိတဲ့ လက်လီဈေးကွက်ကနေ သိရှိလာတဲ့ အချက်ကတော့၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ဈေးဝယ်သူတွေဟာ ဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ သူတို့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုဆိုင်ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းဆီကို မရည်ရွယ်ကြဘဲနဲ့ ဦးတည်နေကြတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့နံရံကို “Power Wall” လို့ခေါ်ကြပြီး အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သင့်ရဲ့ အဓိက အရေးကြီးဆုံး ဦးစားပေးချင်ဆုံး ပစ္စည်းတွေကို ပြသရမယ့်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြသတဲ့အခါမှာလဲ မိမိအထူးအာရုံစိုက်စေချင်တဲ့ ဘယ်ပစ္စည်းကိုပြမယ် ပြီးတော့ ဘယ်လိုပုံစံလေး ပြလိုက်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုလာပါတယ်။ဥပမာ ။ ပစ္စည်းအသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရာသီနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၊အမြတ်များများရတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် အဝယ်များတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဈေးဝယ်သူရဲ့ ဝယ်ချင်စိတ်ကို နှိုးဆွပေးဖို့ နဲ့ အာရုံစိုက်ခံရဖို့အတွက် Stories ပုံလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် အကျဉ်းချုန်းပြသတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေ နဲ့ဆိုရင်တော့ တကယ့်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့။
လမ်းလျောက်ခိုင်းပါ . . .
ဒါကတော့ သင့်ဆိုင်ရဲ့ပုံစံအနေအထား အကျဉ်းအကျယ်ပေါ်တော့မူတည်ပါတယ်။ခုနကအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ဈေးဝယ်သူ ညာဘက်ကွေ့ လာပြီးရင်နောက်ထပ်လုပ်ရမှာက သင့်ဆိုင်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်ဖို့အတွက် ဈေးဝယ်သူလျှောက်လာဖို့ လမ်းကြောင်းတွေ ပြင်ဆင်ပေးရတာ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေက ဝယ်ယူနှုန်း တိုးလာမယ်လို့ အာမမခံနိုင်ပေမယ့်လည်း လမ်းကြောင်းလေးတွေ လုပ်ပေးထားတာဟာ ဆိုင်မှာလူများပြီး ကျပ်နေတာကို ပြေလျော့သွားစေမယ့် နည်းတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်တော်တော်များများကတော့ ညာဘက်ခြမ်းကနေပတ်လည် လမ်းကြောင်းပုံစံနဲ့ ဈေးဝယ်သူကို လျှောက်စေပြီး ဆိုင်နောက်ရောက်သွားရင်တော့ ရှေ့ကိုပတ်ပြီး ပြန်လည်လျှောက်စေတဲ့ နည်းလမ်းကိုသုံးကြပါတယ်။တစ်ချို့ကျတော့လဲ လမ်းကြောင်းကိုကွဲပြားတဲ့ပစ္စည်းဒီဇိုင်းလေးတွေ ပြီးတော့ ကြမ်းခင်းပုံစံလေးတွေနဲ့ပဲအလွယ်တကူ ခွဲခြားထားကြပါတယ်။ ကြားဖူးတဲ့စကားပုံလေးအရ ဆိုတော့ “where the eyes go,the feet will follow” ပေါ့။နောက်ထပ်သိထားရမှာကတော့ အဲ့သည့်နည်းလမ်းလေးတွေဟာဈေးဝယ်သူတွေကို ကိုယ်သွားစေချင်မယ့်နေရာကို သွားစေဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက် ဖန်တီးနိုင်တာပါပဲ။ အဲဒီတော့ လမ်းကြောင်းရဲ့အဆုံးမှာ မျက်စိပဒေသာရစေမည့်အပြင်အဆင်တွေ ပြီးတော့ အာရုံဖမ်းစားနိုင်မယ့် ပစ္စည်းတွေ ပြသထားနိုင်တာပေါ့။
ခြေလှမ်းတွေနှေးနေဖို့လဲလိုသေးတယ် . . .
သင့်ရဲ့အချိန်တွေ၊ အားအင်တွေ ထည့်သွင်းပြီးကြိုးစားရခြင်းရဲ့လိုချင်တဲ့ ရလာဒ်ကတော့ သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေ တစ်ခုမကျန်ရောင်းထွက်ဖို့ပဲဖြစ်လောက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခြေခံအားဖြင့် ဈေးဝယ်သူတွေ ရပ်ငေးနေစေဖို့အတွက် အမှတ်အသားတွေ ၊အထူးပစ္စည်းတွေနဲ့ ရာသီနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာတွေလဲ ပြသဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ဆိုင်က လမ်းကြောင်းတွေမဖန်တီးပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဈေးဝယ်သူမျက်စိထဲမှာ လွယ်လွယ်ကူကူရှာနိုင်အောင်ပစ္စည်းတွေကို သူ့အုပ်စုနဲ့သူထားထားဖို့ကလဲ အရေးတကြီးတွေးထားဖို့လိုတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက အဝယ်များတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မျက်လုံးနဲ့ တတန်းတည်းနေရာမှာပြသထားသင့်ပြီး အရောင်းနည်းတဲ့ပစ္စည်း တွေကိုတော့ အောက်မှာဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်အပေါ်ဘက်မှာဖြစ်ဖြစ် ထားသင့်ပါတယ်။ အမြဲလာဝယ်တဲ့ ဈေးဝယ်သူတွေ အမြင်ဆန်းသစ်မှုတွေ အမြဲဖြစ်နေပြီး ခြေလှမ်းတွေနှေးနေအောင် အတွက် တပတ်တခါလောက်တော့ အနည်းဆုံး ပြသမှုတွေပြောင်းလဲပေးဖို့လိုပါတယ်။
သက်တောင့်သက်သာနေရာလေးတွေ . . .
ဈေးဝယ်သူအမူအကျင့်ကျွမ်းကျင်သူ Paco Underhill ပြောတာကတော့ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးဈေးဝယ်သူတွေဟာ ဆိုင်ထဲမှာလျှောက်ရင်း တခြားဈေးဝယ်သူတွေ သူတို့ရဲ့ကျောကိုပွတ်တိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားသူတွေရဲ့ကျောကို ပွတ်တိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ် သဘောမတွေ့ ကြပါဘူးတဲ့။ တခါတလေ သူအရမ်းသဘောကျတဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်နေရင်းနဲ့တောင် အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားရင် စိတ်တော့အနည်းငယ်ညစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ရှောင်ရှားဖို့အတွက် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအေးအေးဆေးဆေး ကြည့်ဖို့အတွက် ဈေးဝယ်သူတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ နေရာလွတ်လေးတွေ ဖန်တီးပေးထားရပါမယ်။ပြီးတော့ စောင့်ဆိုင်းတဲ့နေရာလွတ်တွေမှာလည်း သက်တောင့်သက်သာရှိစေမယ့် ဆိုဖာတွေခုံတန်းလျားတွေထားထားပေးခြင်းဟာလည်းဈေးဝယ်သူတွေ သင့်ဆိုင်ထဲမှာ အချိန်ကြာကြာနေဖို့အတွက် တွန်းအားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ။ အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့ ဈေးဝယ်ဖို့စိတ်မဝင်စား တဲ့သူတွေ ပြီးတော့ ကလေးတွေထိုင်နေနိုင်တော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဈေးဝယ်ယူလို့ ရတာပေါ့။
ဈေးဝယ်သူတွေဟာ ပုံမှန်ညာဘက်ခြမ်းကနေဝင်လာခိုင်းမယ် ပြီးတော့ သူတို့ကိုလမ်းအတိုင်း လျှောက်ပြီး ဆိုင်ကိုပတ်ခိုင်းမယ် ဆိုရင်တော့ ဆိုင်အရှေ့ဘက် ဘယ်ဘက်ခြမ်းနေရာဟာ ငွေရှင်းကောင်တာထားဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာလေးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒါက သင့်ဆိုင်ရဲ့အကျဉ်းအကျယ်နဲ့ ပုံစံပေါ်လဲ မူတည်သေးပါတယ်။အဲဒီတော့ ဘယ်နေရာမှာ ငွေရှင်းကောင်တာ ထားဖို့သင့်တယ်ဆိုတာကတော့ သင်ပဲ အဓိကဆုံးဖြတ်ရတော့မှာပါ။တစ်ခုသိထားရမှာက တကယ်လို့သင်ဟာဆိုင်မှာတစ်ဦးတည်း ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် စောင့်ကြည့်ဝန်ထမ်းမရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် ပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးမှုတွေမရှိအောင် မြင်သာထင်သာရှိမယ့် နေရာမှာ ရှိနေဖို့ကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ငွေရှင်းကောင်တာတွေရဲ့ တခြားအချက်လေးတွေကတော့ . . .
ဈေးဝယ်သူတွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေ ဒါမှမဟုတ် ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ ကောင်တာ ဖြစ်ဖို့လိုခြင်း။
ကောင်တာရဲ့နောက်က နံရံကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေ နဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ရာ Displays တွေပြသနိုင်ခြင်း။
ငွေရှင်းတဲ့အချိန်ထိ နီးနီးကပ်ကပ်နဲ့ ဈေးဝယ်သူကို တခြားပစ္စည်းတွေ ဝယ်ချင်စိတ်ရှိအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်း။
“သင်ရှာဖွေတဲ့ပစ္စည်းတွေ အကုန်ရှာတွေ့ခဲ့ရဲ့လား” ကဲ့သို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးမေးမြန်းတာတွေ ဒါမှမဟုတ် လျော့ဈေး အစီအစဉ်တွေ ၊ ပစ္စည်းပြန်လဲပေးတာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးသင့်ဆိုင်ရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်း (Rules) တွေကို ပြောပြပေးခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့အပြင်အဆင်ကို ပြင်ဆင်မွန်းမံတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှအဆုံးသတ် မသွားပါဘူး။ ဈေးဝယ်သူတွေ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေရနေဖို့အတွက် ပစ္စည်းတွေ လဲထည့်တာတွေ ၊ အမြင်ပြောင်းတာတွေ နဲ့ ထပ်ပေါင်း ထည့်တာတွေဟာအမြဲလုပ်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင် ဒါမှမဟုတ် သင့်ဝန်ထမ်းတွေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ မိသားစုဝင် တွေကို ဆိုင်ထဲ ပတ်လျှောက်ခိုင်းပြီး ဘယ်အချက်တွေအားနည်းတယ်ဆိုတာကို အရိုးသားဆုံး ပြောပြခိုင်းပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဈေးဝယ်သူတွေ သင့်ဆိုင် ရဲ့အပြင်အဆင်ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်ဟာတွေသဘောကျလဲ ၊ဘယ်ဟာတွေရှောင်ရှားသွားလဲ ဆိုတာတွေကို အကဲခတ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အပြင်အဆင်များနဲ့သင့်ဆိုင်ကို ပြင်ဆင် သွားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိအားတွေကို အကောင်းဆုံးတင်းခံပြီး သင့်ရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ နားတွေကိုအမြဲဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင်နဲ့သင့်ဈေးဝယ်သူတွေအတွက် Win- Win ဖြစ်စေနိုင်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းလေး ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုတာသေချာသလောက်ပါပဲ။
ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲ မှု အမှားများ နှင့် ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများ
ဘာကြောင့် ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်မှုတွေဟာ လက်လီလုပ်ငန်းများအတွက်အရေးကြီးရတာလဲ ?
ဖောက်သည်မြဲအောင် ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ ?
POS Software တွေက သင့်ကိုဘာတွေကူညီပေးနိုင်မလဲ
Founded in 2005, Global Wave Technology isaprovider of software development, outsourcing and IT consulting services with 100+ IT professionals. For over 10 years we’ve been bringing solutions & service to government, SME, midsized and enterprise companies in many industries.
3rd Floor, AKK Shopping Center. Laydaunkkan Road, Thingangyun, Yangon.
Room (D-106) 1st floor, Bet 77st x 78st, Bet 32st x 33st, Shwe Phyu Plaza, Mandalay.
Inquires for support
pos.marketing@globalwave.com.mm +95 9775111919 ( Ext : 2001 )
pos.service@globalwave.com.mm +95 9775111919 (Ext : 2002,2003)
pos.service@globalwave.com.mm +95 9775111919 (Ext : 2004,2005)
Copyright 2020 © GlobalPOS, All rights reserved